Waxgaradka Puntland iyo Jubbaland oo Wacyi-galin ka Bilaabay Deegaanka Magacley – Radio Daljir
Oktoobar 15, 2015 1:51 b 0
Khamiis, Oktoobar 15, 2015 (Daljir) — Wafdi ay hogaaminayaan Suldaan Siciid Maxamed Garaase iyo Islaan Bashiir Islaan Cabdulle ayaa gaaray deegaanka Magaclay ee gobolka Nugaal iyagoo ka amba baxay deegaanka Maygaagle ee isla gobolka Nugaal.
Waxaa kamid ah Wafti gudoomiyaha gobolka Nugaal Cumar Cabdullahi Faraweyne’Isimo iyo Nabadoona ka yimi gobolada Puntland iyo Jubbaland’ kuwaas oo doonaya inay xaliyaan dirirta u dhaxaysa laba beelood oo mudo halkaasi ku dagaalamayey.
Isimada iyo Nabadoonada ayaa raba inay go gol nabadeed u dhigeen beelaha mudada deegaanadaasi ku dagaalamayey’waxayna horay u sheegeen inay labada beelood ugu baaqeen xabad joojin taaso dhaqan gashay.
Beelaha ayaa dirirtoodu soo laa laabanaysay mudo u dhow 10 sano’mana jirto ilaa xiligaa guul laga gaaray in la xaliyo colaada labada beelood’ waxaye hada Isimada iyo Nabadoona Puntland iyo Jubbaland rabaan inay soo afjaran dagaalka ka dhex aloosan beelaha walaalaha ah.
Ugu danbayntii ,waxgaradka ayaa kulamo gaar ah gaar ah la qaatay qaar kamid ah bulshada Magacley si ay uga wacyi galiyaan dhibaatada Colaadda ay ku keeni karto dhamaan deegaanka oo dhan.